Vaovao - fampiasana propionat calcium
fampiasana propionat calcium
Mampitombo ny kalsioma na propionat calciummanana ny formula Ca (C2H5COO) 2. Izy io dia ny sira calcium an'ny asidra propanoic.
Amin'ny maha-additive sakafo azy dia voatanisa ao amin'ny E isa 282 ao amin'ny Codex Alimentarius. Ny calcium propionate dia ampiasaina ho toy ny preservative amin'ny karazan-vokatra marobe, ao anatin'izany ny: mofo, koban-koba hafa, hena voahodina, whey ary vokatra vita amin'ny ronono hafa.  Amin'ny fambolena dia ampiasaina, ankoatry ny zavatra hafa, mba hisorohana ny tazo ronono amin'ny omby sy ho famenon-tsakafo.  Ny propionates dia manakana ny mikraoba tsy hamokatra angovo ilainy, toy ny ataon'ny benzoates. Na izany aza, tsy toy ny benzoates, propionates dia tsy mila tontolo misy asidra. 
Ny kalsioma propionate dia ampiasaina amin'ny vokatra fanaova-mofo ho toy ny «inhibitor moule», mazàna amin'ny 0,1-0,4%  (na dia mety hahatratra 1% aza ny sakafom-biby). Ny fandotoana ny bobongolo dia heverina ho olana lehibe eo amin'ireo mpanao mofo, ary ny toe-javatra izay hita matetika amin'ny fanaova mofo amin'ny toetoetry ny fitomboan'ny bobongolo. 
Am-polony taona lasa izay, Bacillus mesentericus (tady), dia olana goavana,  saingy ny fihatsarana ny fidiovana ankehitriny ao amin'ny trano fanaova-mofo, miaraka amin'ny famolavolana haingana ny vokatra vita, dia nanala an'io endrika fanimbana io. [Citation ilaina] Calcium propionate sy sodium propionate dia mandaitra amin'ny tady B. mesentericus sy ny bobongolo. 
Ny metabolism an'ny propionate dia manomboka amin'ny fanovana azy ho propionyl coenzyme A (propionyl-CoA), ny dingana voalohany mahazatra amin'ny metabolisma asidra carboxylic. Koa satria ny asidra propanoat dia manana karbôna telo, ny propionyl-CoA dia tsy afaka miditra mivantana amin'ny okididia beta na ny tsingerin'ny asidra citrika. Amin'ny ankabeazan'ny vertebrata, ny propionyl-CoA dia karboksily ho any D-methylmalonyl-CoA, izay omena ho L-methylmalonyl-CoA. Ny anzima miantehitra amin'ny vitamina B12 dia mandrindra ny fandaminana indray ny L-methylmalonyl-CoA mankany amin'ny succinyl-CoA, izay mpanelanelana amin'ny tsingerin'ny asidra citrika ary azo ampidirina mora foana ao.
Ny ankizy dia nihaika ny alikaola propionate na placebo tamin'ny alàlan'ny mofo isan'andro tao anaty fitsapana crossover voafantina indroa jamba. Na dia tsy nisy fahasamihafana lehibe aza tamin'ny fepetra roa, dia nisy fahasamihafana lehibe teo amin'ny statistika hita tao amin'ny tahan'ny zaza izay "niharatsy" ny fihetsik'izy ireo tamin'ny fanamby (52%), raha oharina amin'ilay ampahany izay "nihatsara" ny fitondran-tenany niaraka tamin'ny fanamby (19%). [ 9] Rehefa nampidirina mivantana tao amin'ny ati-davak'ireo mpikiky asidra ny asidra propanoika dia niteraka fiovan'ny fitondran-tena miverimberina (ohatra ny hyperactivity, dystonia, ny fahasosorana ara-tsosialy, ny fikirizana) ary ny fiovan'ny ati-doha (oh: neuroinflammation voajanahary, fihenan'ny glutathione) izay maka tahaka ny otisma ataon'ny olombelona. 
Ny propionat calcium dia azo ampiasaina ho fungisida amin'ny voankazo. 
Tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny 1973 notaterin'ny EPA, ny fitantanana an-drano 180 proppm an'ny propionat calcium dia hita fa misy poizina kely amin'ny trondro maintso manga. 
Ny propanoate kalsioma dia voarara any amin'ny firenena sasany toa an'i Russia noho ny alikaola sasany sy ny kibo. [Citation ilaina] Tsy voarara any Shina izany. 